« Hanatanteraka ny Velirano nataon’ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA tamin’ny vahoaka Malagasy no nametrahana ahy eto amin’ny fitantanana ny Ministeran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny haitao ara-kajy mirindra.» Izany no nambaran’ Andriamatoa Christian RAMAROLAHY tamin’ny mpanao gazety sy ny mpiara-miasa aminy tamin’ny famindram-pahefana nataony tamin’ny minisitry ny MPTDN teo aloha.
Mandroso makany amin’izany fanamby izany tokoa ny Ministera ankehitriny. Efa-bolana monja taorianan’ny nandraisany ny asany dia hita ireo ezaka vita. Notanterahina tao amin’ny Carlton Anosy ny sabotsy 25 mey 2019 ny lanonana fampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ny “PaositraMONEY”, tolotra vaovao an’ny Paositra Malagasy. Nifanindry an-dalana amin’ ny tsingerintaona voalohan’ny IEM izao fotoana izao. Anisan’ireo nanangana izany niaraka tamin’ny Andriamatoa Filoha ny Repoblika Andry RAJOELINA tamin’izany fotoana izany ny ministry ny Paositra ankehitriny.
Ity tolotra Paositra Money ity dia vokatry ny fiarahamiasan’ny Paositra Malagasy, ny NUMHERIT SA ary BOA ary ny finiavan’ny Minisitra hitondra fiovana sy fanatsarana ao amin’ny Paositra Malagasy no nahavitana izao tao anatin’ny fotoana fohy.
Efa an-dalana ihany koa ny asa fanavaozana ny Biraon’ny paositra sy ny minisitera eo Antaninarenina ary hifandray tsy ankiato ny biraon’ny Paositra eraky Madagasikara amin’ny alalan’ny teknolojia vaovao (interconnectivité).